Tamban-jotra tserasera "Facabook" : Niteraka fisavoritahana -
AccueilSosialyTamban-jotra tserasera « Facabook » : Niteraka fisavoritahana
08/11/2018 admintriatra Sosialy 0
Isan’ ny nampisavoritaka ny fifidianana omaly ny fampitam-baovao tamin’ ny halalan’ny tamban-jotra tserasera Fb, satria dia maro ireo vaovao tsy marim-pototra nivoaka ka nampikorontana ny saim-bahoaka. Somary tara ihany anefa ny Ceni mitondra fanazavana sy fanitsiana tamin’ ny kaontin’izy ireo, ka efa niely ny tsao vao misy ny fanazavana. Maro ihany koa ireo izay nilaza fa tsy tafiditra anatin’ ny lisim-pifidianana, nefa efa tonga teny amin’ ny toeram-pandatsaham-bato. Maro ihany koa ireo izay manely vaovao tsy marina, tahaka izany ny ora fisokafana sy fikatonan’ny biraom-pandatsaham-bato. Isan’izany ihany koa ohatra ny tsy fahitana ny anarana anatin’ ny lisim-pifidianana, dia misy milaza fa azo atao ny mifidy fa maka taratasy eny amin’ ny vaomiera maheleo tena misahana ny fifidianana fotsiny ihany. Maro amin’ ny malagasy noho izany no mila ny tamban-jotra amin’ ny zavatra hafa, fa tsy amin’ ny fijerena ny tombotsoa ambonin’ ny firenena.
Isan’ny nanano sarotra ny asan’ny mpanao gazety izao, ny filazana anatin’ ny tamban-jotra tserasera fa tsy azo atao ny mitondra fakan-tsary. Dia nisy nandika vilana izany, ka nisy tamin’ ireo lehiben’ny birao mpifidianana no tsy namela ny mpanao gazety haka asary. Mazava anefa ny tori-mariky ny Ceni fa ny mpifidy andatsa-bato no tsy mahazo mitondra finday misy fakan-tsary. Isan ‘ny mbola niparitaka tamin’ ny halalan’ ny tamban-jotra ihany koa ny filaza ny fiparitahan’ ny biletin efa misy marika, ka na dia ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana aza dia sahirana nitondra fanitsiana tamin’ ny fivohan’ izany vaovao izany. Farany noho ny fisian’ity tamban-jotra tserasera ity, na tsy azo hitondrana finday aza anaty biraom-pifidianana. Misy hatrany ireo tanora maka sary anatin’ ireny birao fanatsaham-bato ireny, ka voatery nandraisana fepetra.